Shirkad Ingiriis ah oo Himilo uga warrantay doorkeeda Ciidanka ilaalinta Shidaalka ee Somaliland | Aftahan News
Shirkad Ingiriis ah oo Himilo uga warrantay doorkeeda Ciidanka ilaalinta Shidaalka ee Somaliland
London(Aftahannews):- Shirkad lagu magacaabo Assaye Risk oo shaqadeedu tahay la-talinta ammaanka, tabobbaridda Ciidammada u gaarka ah goobaha Shidaalka laga qodo ee heer caalami iyo weliba qalabayntooda, ayaa sheegtay inaanay Somaliland u tabobbari doonin, isla markaana u qalabayn doonin Ciidammo gaar ah oo ay Xukuumaddu sheegtay inay ilaalin doonaan Shirkadaha Sahaminta iyo baadhista Shidaalka Somaliland oo dhawaan la shaaciyey inay dalka ka hawlgeli doonaan.
Guddoomiyaha Shirkadda Assaye Risk oo laga leeyahay dalka Ingiriiska, ayaa beenisay inay tabobbar iyo qalabayn u samaynayaan Ciidanka ilaalinta Shidaalka Somaliland, balse hawshoodu ku koobnayd u diyaarinta Warbixin fududeynaysay abuuritaanka Ciidanka Somaliland ee ilaalinta shidaalka gaarka u noqon doona.
Sida shalay lagu baahiyey Wargeyska Boloomberg oo dhaqaalaha caalamka ka faallooda, ayaa lagu sheegay in Qaramada Midoobay werwer ka muujisay qorshaha Somaliland ugu kiraysatay Shirkadda Assaye Risk, oo ah shirkad qaabbilsan amaanka, inay tabobbar iyo qalabayn u samayso Ciidammada ilaalinta Shidaalka, oo ay ku bixi doonto Lacag gaadhaysa $25 million (shan iyo labaatan Milyan oo Doollar).
Guddoomiyaha Shirkadda Assaye Risk Arabella Wickham, ayaa sheegtay in xubno gaadhaya 420 ee Ciidamada ilaalinta Shidaalka ee Somaliland ay dhinaca ammaanka ka caawin doonaan Shirkadaha caalamka ee hawlaha sahaminta Shidaalka ka samaynaya Somaliland. “Sida ka muuqata warbixinta, Assaye Risk, waxay ku muujisay waajibaadka ciidanka oo ah ilaalin, iyo ka hortag, halis ku soo waajahan shirkadaha sahaminta.” ayey Wickham tidhi.
Waxaanay Arabella Wickham intaas sii raacisay oo ay tidhi; “Ciidanka oo Xukuumadda Somaliland leedahay, si gaar ahna u shaqeynaya, waxa aqoonsan doona Qaramada Midoobay, waxaana lagu abuuray si waafaqsan dastuurka Somaliland.”
Guddoomiyaha Shirkadda Assaye Risk, ayaa beenisay warka Wargeyska Boloomberg ku sheegay inay tabobbar iyo qalabayn u samaynayaan Ciidanka ilaalinta Shirkadaha Sahaminta iyo baadhista Shidaalka ee Somaliland ka hawlgeli doona, kana hadlay hawl ay Xukuumadda Somaliland ka caawiyeen.
Balse, su’aal uu Weriye Maxamuud Walaaleye oo Wargeyska Himilo ka tirsani ka weydiiyey beenintooda warka Wargeyska Bloomberg kula xidhiidhiyey qalabaynta iyo tabobbarka Ciidanka ilaalinta Sahaminta iyo baadhista Shidaalka Somaliland iyo tafaasiisha ay ka bixisay ee Wargesyka Boloomberg soo qoray, ayey ku sheegtay inay isfaham la’aani jirto.
Guddoomiyaha Shirkadda Assaye Risk Arabella Wickham oo su’aashaas ka jawaabaysaa waxa ay tidhi; “Waxa jira isfaham la’aan. Assaye Risk waxay u diyaarisay Xukuumadda Somaliland warbixintii fududeynaysay abuuritaanka Ciidanka ilaalinta Sahaminta Shidaalka, balse annagoo ka fogaanayna khilaaf, gebi aahaan ma qalabayn doonno, tabobbar-na ma siin doonno Ciidankaas. Waannu sixi doonnaa Wargeyska Bloomberg kaalinta Assaye Risk ee arrinkan.”
Mar la weydiiyey Wickham in Shirkadda Assaye Risk ka qeybgeli doonto qandaraas lagu bixinayo Shirkadda ku guulaysata maalgelinta Ciidanka ilaalinta baadhista iyo sahaminta Shidaalka Somaliland oo dhawaan Xukuumadda Somaliland qaban doonto ayey ku jawaabtay; “Shirkadda Assaye Risk kama qeybgeli doonto qandaraaska aad sheegtay.”